प्रतिस्थापन माइक्रो इयरपीस केबलहरू | माइक्रो इयरपिस, क्यामेरा किन्नुहोस् र जाँचमा जाँच गर्दै - eXamYo.com को लागी हेर्नुहोस्
प्रतिस्थापन माइक्रो इयरपीस केबलहरू
प्रतिस्थापन को लागी सबै भन्दा राम्रो गुणवत्ता केबल्स को माइक्रो इयरपीस.
केवल मूल प्रयोग गर्नुहोस् सामान र स्पेयर पार्ट्स लाई परीक्षणहरूमा प्रतिलिपि गर्नुहोस् पूर्ण सुरक्षाको साथ।
आगमनात्मक हार पछिल्लो पुस्ताको साथ एकीकृत माइक्रोफोन उच्च संवेदनशीलता र शोरको रद्द।
संग संगत eXamYo क्लासिक माइक्रो इयरपीस, eXamYo प्रो माइक्रो इयरपीस र सबै भन्दा पारम्परिक माइक्रो इयरपीस.
$ 19.00 भाडोमा हाल
प्रतिस्थापन माइक्रो EARPIECES केबलहरू
X 1x प्रतिस्थापन माइक्रो इयरपीस केबलहरू
के तपाइँसँग माइक्रोफोन समावेश छ?
हो, यसका अतिरिक्त ईन्डक्टरको हार बोक्छ माइक्रोफोन तपाईंको सहयोगीसँग कुराकानी गर्न।
हामीसँग विश्वव्यापी २ 24 घण्टा ढुवानी छ, बिहान 8.30.:XNUMX० भन्दा अघि डेलिभरीको साथ र अर्डरहरू एकै दिनमा पठाइन्छ, त्यसैले तपाईं अर्को दिन सधैं आफ्नो अर्डर प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामी सिपि। र सेवामा सब भन्दा छिटो!
प्रतिस्थापन माइक्रो इयरपीस केबल्सको लागि समीक्षा लेख्नुहोस्